Google တွင် PDF များကိုနေရာချခြင်း - Semalt မှရှင်းပြသည်
မည်သူမဆို ၀ က်ဘ်ပေါ်တွင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် PDF ဖိုင်များဖြင့်ရရှိနိုင်သောအီး - စာအုပ်များ၊ လမ်းညွှန်များ၊ သင်ကြားပို့ချမှုများသို့မဟုတ်လက်စွဲစာရွက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည်ဟုမည်သူမဆိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ အရည်အသွေးမြင့်သောအကြောင်းအရာများနှင့်အသုံး ၀ င်သောပစ္စည်းများဖြင့်အသုံးပြုသူများကိုမည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုသင်သိလိုပါက PDF positioning ဆိုတာဘာလဲနှင့်ဤပုံစံဖြင့်ဖိုင်များကိုမည်ကဲ့သို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမည်ကိုကြည့်ပါ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ PDF ဖိုင်တွေကိုမတွေ့တဲ့သူကိုရှာဖို့ခက်တယ်။ ဤပုံစံရှိဖိုင်များသည်နေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါသော်လည်းသူတို့၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အလားအလာကိုလူတိုင်းသတိမပြုမိကြပါ အကောင်းမြင်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှရရှိနိုင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤပုံစံကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရသော်လည်း PDF ဖိုင်များနှင့်အသုံးပြုသူများကိုမည်သို့ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင့်သည်။
PDF format ၏သမိုင်းသည် ၁၉၉၁ တွင် Adobe ၏ပူးတွဲပိုင်ရှင်သည်စက္ကူစာရွက်စာတမ်းများကိုဒစ်ဂျစ်တယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောတော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ PDF မှတ်တမ်းများကိုအထူးစံနှုန်းများအရဖန်တီးခဲ့ပြီး၎င်းတို့အသုံးပြုမှုသည်လုံခြုံပြီးအဆင်ပြေပါသည်။ ပထမ ဦး စွာအကြောင်းအရာ၏တင်ဆက်မှု၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းတို့တွင်၎င်းသည်၎င်း၏ application ကိုတွေ့ပြီဖြစ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်စာပေများ၊ လက်စွဲစာအုပ်များ၊ စာချုပ်များသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
PDF format ဆိုတာဘာလဲ။
PDF format သည်အိတ်ဆောင် Document Format ၏အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အခမဲ့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြင့် portable Document format ဖြစ်သည်။ စကားလုံးတစ်လုံးစီကိုဤပုံစံဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုသတ်မှတ်ထားသည်။
လွယ်ကူစွာ PDF တင်ပါ။
Google က PDF တွေကိုညွှန်းပါသလား။
PDF format သည်မကြာမီ၎င်း၏ ၃၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုကျင်းပလိမ့်မည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်ရုပ်များတွင်ဤစာရွက်စာတမ်းများကိုမမြင်နိုင်သည့်သီအိုရီများရှိခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ ဖိုင်များရှိအကြောင်းအရာများကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကုဒ်ပါရှိသည့်နည်းတူဖတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ PDF files များကို indexing လုပ်ခြင်းသည် encrypted သို့မဟုတ် password ဖြင့်ကာကွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုသူများအတွက်ရရှိနိုင်သည့် files များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
Google search engine သည်အကြောင်းအရာများကို HTML ၌ရေးထားသည့်စာသားအတိုင်းဖတ်သည်။ PDF ဖိုင်များကို indexing လုပ်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကိုရရှိရန်အရည်အသွေးမြင့်သောအကြောင်းအရာနှင့်၎င်းနှင့်သင့်လျော်သောသော့ချက်စာလုံးများဖြင့်ပြည့်နှက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒါကအဆုံးမဟုတ်ပါ PDF ဖိုင်များကိုနေရာချသည့်အခါနောက်ထပ်ဘာကိုသတိရသင့်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို PDF format ဖြင့်ရရန်သင်အောက်ပါပုံသေနည်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ရှာဖွေရေးစကားစု + filetype: pdf, ဥပမာ filetype: pdf ပန်းကန်ဆေးစက်အသုံးပြုသူလက်စွဲ။
SEO အတွက် PDF ဖိုင်များကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ။
အခုဆိုရင် PDF files တွေကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာရှာဖွေရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။
PDF နှင့် SEO - ဘာကိုသတိရသင့်သလဲ။ အဓိကပြissuesနာတစ်ခုမှာဖိုင်ခေါင်းစဉ်သည်၎င်းနှင့် ပါတ်သက်၍ အပြည့်အဝကိုက်ညီရန်ဖြစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အရ၊ သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဖိုင်ထဲရှိအရာအားရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရုံသာမကအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းတိုးပွားစေသည် ရှာဖွေမှုရလဒ်များအတွက်မြင့်မားသောရာထူးရတဲ့။ သို့သော်ခေါင်းစဉ်သည်စာလုံးရေ ၅၀ မှ ၇၀ အထိရှိသင့်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ အချိုရည်ထည့်သွင်းနည်းကိုမသုံးပဲချိတ်ဆက်သူ့ဟာသူတတ်နိုင်သလောက်သဘာဝကျသင့်သည်။ နာမည်တစ်ခုဖန်တီးသောအခါအင်္ဂလိပ်စာလုံးများ၊ လေးထောင့်ကွက်များ (သို့) နေရာများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းမှမဟုတ်လျှင်၎င်းသည် URL နှင့်အဆင်မပြေသောစာလုံးများပါ ၀ င်သော URL ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
PDF document တစ်ခု၏ခေါင်းစဉ်နှင့်ဖော်ပြချက်နှစ်ခုလုံးသည် HTML နှင့် Meta description element များကဲ့သို့တူညီသော function ကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ SEO SEO ရှာဖွေခြင်းသည်အသုံးပြုသူများ၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် algorithms များကိုအခြေခံသင့်သည်။ PDF စာရွက်စာတမ်း၏ခေါင်းစဉ်သည်စာရွက်စာတမ်းများ၏အမည်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သောအမည်နှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်ထိုက်တန်သည် သော့ချက်စာလုံးများ၏အလားအလာ ပေးထားသောပြissueနာအားအမြီးရှည်ထားသောစာပိုဒ်တိုများသို့မဟုတ်အခြားပုံစံဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဖော်ပြချက်တွင် CTAs ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ: check, find, ဟူသောသုံးစွဲသည့်စာရွက်စာတမ်းများအသုံးပြုသူသည်စာရွက်စာတမ်းကိုနှိပ်ပါ။
၃။ SEO အတွက်ထူးခြားသောစာသားကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း
SEO အတွက် PDF ဖိုင်များကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ။ စာရွက်စာတမ်း၏အကြောင်းအရာနှင့်ကိုက်ညီသောသော့ချက်စာလုံးများကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ခေါင်းစဉ်များထုတ်ယူခြင်းတို့ပါ ၀ င်မည့်စာသား၏သင့်လျော်သောအကောင်းဆုံးကိုဂရုပြုသင့်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုစာသားကိုလှန်လှောရှာဖွေရန်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များရှာဖွေရန်အားပေးသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်ရုပ်များ၏အခြေအနေတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အဆင့်ဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးအရေးအကြီးဆုံးအကြောင်းအရာကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ အကြောင်းအရာများကိုစုစည်းပြီးစာရွက်စာတမ်းများအတွင်းသွားလာမှုကိုလည်းကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်မာတိကာတစ်ခုပါ ၀ င်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
SEO အတွက် PDF files များကို Optimization လုပ်ခြင်းသည် standard HTML pages များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ စာသားပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မလုံလောက်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်။ သင်ဂရုစိုက်သင့်သည် ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာ ၎င်းကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အခြားပေါ်တယ်များမှကူးယူကူးယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်၎င်းကိုပုံတူပွားခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ သင်အသုံးပြုနိုင်သည် Semalt အခမဲ့ tool ကို ထူးခြားမှုအကြောင်းကို။
PDF နေရာချထားနေစဉ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသီးခြားစာမျက်နှာငယ်များကိုရည်ညွှန်းမည့်လင့်ခ်များထည့်သွင်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤကျေးဇူးကြောင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်ရုပ်များသည်စာရွက်စာတမ်းပါအကြောင်းအရာများကိုမှတ်မိနိုင်ပြီးစာမျက်နှာပေါ်ရှိစာသားများသို့သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိလမ်းကြောင်းကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့်စာမျက်နှာ၏အရေးကြီးသောကဏ္sectionsများကိုစက်ရုပ်များပြသရန်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သောကျောက်ဆူးကိုအသုံးပြုရန်သတိရပါ ၎င်းသည်ဆွေးနွေးနေသောအကြောင်းအရာနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည် Google search robots အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
စာသား format နဲ့ 5. PDF ဖိုင်
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် PDF ဖိုင်များကိုအညွှန်းကိန်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်စာရွက်စာတမ်းကိုစာသားပုံစံဖြင့်သိမ်းဆည်းပါ။ ဒါပေမယ့်အကြောင်းအရာကိုရုပ်ပုံတစ်ခုနဲ့တင်တာမကောင်းဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်ရုပ်သည်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုအညွှန်းကိန်းရှာ။ မရပါ၊ ရလဒ်အနေဖြင့်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်စာရွက်စာတမ်းများ၏မြင်သာမှုကိုတိုးတက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဖိုင်အမည်တစ်ခုဖန်တီးသောအခါဤအလေ့အကျင့်ကိုစိတ်ထဲထားသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သော့ချက်စာလုံးပါသည့်စာတိုလိပ်စာအတွက်စာလုံးအကြီးများ၊ စာလုံးအကြီးများ၊ နေရာများသို့မဟုတ်နံပါတ်များကိုစွန့်လွှတ်သင့်သည်။ ရှာဖွေရေးဘားမှသူသို့မဟုတ်သူမစိတ်ဝင်စားသောစာရွက်စာတမ်းကိုအလျင်အမြန်တွေ့ရှိသောအသုံးပြုသူမှဖော်ရွေသော URL လိပ်စာကိုအမှတ်ရနိုင်သည်။
PDF ဖိုင်များကိုနေရာချသည့်အခါနောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်မှာစာရွက်စာတမ်း၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသနည်း ဖိုင်အရွယ်အစားသေးလေလေပိုမိုညွန်းကိန်းများလေလေ၊ လက်ခံရရှိသူပိုများလာလိမ့်မည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ စာရွက်စာတမ်းတခုမဖန်တီးခင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားတဲ့ရုပ်ပုံများ (သို့) အခြားဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်များကိုချုံ့ခြင်းကအကျိုးရှိတယ်။
ALT attribute တွေ၏ 8 optimization
PDF ဖိုင်တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှတ်မိဖို့လိုတယ် ပုံရိပ်တွေ၏သင့်လျော်သော optimization, နှင့်ပိုမိုတိကျသောစာရွက်စာတမ်း၌နေသောဂရပ်ဖစ် ALT attribute တွေထည့်သွင်းအကြောင်း။ PDF ဖိုင်များသည်များသောအားဖြင့် - လက်စွဲများ၊ ဈေးနှုန်းစာရင်းများ၊ အစီရင်ခံစာများသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်များစွာပါ ၀ င်သောတင်ဆက်မှုများဖြစ်သောကြောင့် ALT attribute ကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်စက်ရုပ်အားဂရပ်ဖစ်များကိုမှန်ကန်စွာဖတ်ရှုနိုင်စေရန်နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအညွှန်းလုပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
PDF optimization ၏ကောင်းကျိုးများ?
PDF document များ၏အလားအလာနှင့်သုံးစွဲသူများအတွက်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးသည်ကိုလူတိုင်းသိသည်မဟုတ်။ သတိပြုရမည်မှာ PDF စာရွက်စာတမ်းများသည်အလွန်အရေးကြီးသောတန်ဖိုးများဖြစ်သည်၊ ဤပုံစံကိုသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တစ်ခုတွင်ဗဟုသုတရလိုသူများကပိုမိုရှာဖွေကြသည်။ PDF ဖိုင်များပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများသည်ပုံမှန် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သည်ထက်ပိုမိုရှင်းလင်းပြီးဖတ်ရလွယ်ကူသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်လျော်သော <PDF optimization သည်အသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ပြောင်းလဲခြင်းတိုးမြှင့်။
သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ PDF ဖိုင်မျိုးစုံရှိသလား။ သို့မဟုတ် UX စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အတွက်အထူးစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား။ များစွာသောအမှုများတွင် PDF ဖိုင်များကို HTML သို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သီးခြားစာမျက်နှာငယ်များဖန်တီးခြင်းသည်အလွန်စျေးကြီးပြီးမလိုအပ်သောအရာများဖြစ်နိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအခြေခံမူများ သုံး၍ SEO အတွက် PDF file ကို PDF နေရာချထားခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောသင့်လျော်သော optimization ကိုသင့်အားပေးနိုင်ပါသည် ရှာဖွေမှုရလဒ်များအတွက်အဆင့်မြင့်။ စုံစမ်းသည်!
PDF ဖိုင်များကို Google ကဘယ်လိုညွှန်ပြသလဲ။
Google search engine သည် PDF ဖိုင်များကို HTML ရှိ link များနှင့်အတူတူပါပဲ။ PDF ဖိုင်များရှိစာသားပါအကြောင်းအရာများသည်စာမျက်နှာကုဒ်တွင်ပါသောအကြောင်းအရာနှင့်ဆင်တူသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်ရုပ်များအတွက်စာသားကိုယ်နှိုက်နှင့်သော့ချက်စာလုံးများဖြင့်ပြည့်နေခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ သို့ရာတွင်၊ ဂူဂဲလ်သည် PDF ဖိုင်များကိုစာဝှက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စကားဝှက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းအကာအကွယ်မပေးလျှင်သာရည်ညွှန်းသည်ကိုသတိပြုပါ။ PDF indexing နဲ့ကွာခြားချက်တစ်ခုက Nofollow attribute ကိုဒီ format နဲ့သတ်မှတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာပါ။
SEO အတွက် PDF optimization ဆိုတာဘာလဲ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်ရုပ်များသည်ဖိုင်များပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရှုနိုင်သောကြောင့်၊ SEO အတွက် PDF optimization သည်စာရွက်စာတမ်းကိုအသုံးပြုသူများအတွက်သာမက Google အတွက်ပါဖန်တီးနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းပါဝင်သည်။ ၎င်းအတွက်စည်းမျဉ်းများကိုလေ့လာခြင်းနှင့် PDF ဖိုင်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအသုံးချသင့်သည်။
PDF များကိုနေရာချသောအခါရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သင်၏အနေအထားကိုတိုးတက်စေမည့်စည်းမျဉ်းအချို့ကိုသတိရသင့်သည်။ ဒီလိုဖိုင်တွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ။
meta ခေါင်းစဉ် tag ကိုပိုကောင်းအောင်;
ဖော်ရွေသော URL တစ်ခုဖန်တီးပါ။
ဂရပ်ဖစ်မှ ALT attribute တွေထည့်သွင်း;
PDF စာရွက်စာတမ်းများသည်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ အကုန်လုံးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း၊ အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် PDF optimization သည်ပိုမိုကြီးမားသောလက်ခံသူအုပ်စုများကိုရောက်ရှိရန်နှင့်တိကျသောမေးမြန်းချက်များအတွက်ရှာဖွေမှုရလဒ်တွင်တတ်နိုင်သမျှမြင့်မားစွာပေါ်ထွက်လာရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏အလုပ်ကိုမင်းထံသို့လွှဲပြောင်းပေးလိုပါသလား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အေဂျင်စီ ? အခမဲ့နေရာချထားမှုအမှာစာမှာယူပါ၊ သင်မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုရှာဖွေပါ။ Semalt SEO ဆိုသည်မှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေး သင်၏ site SEO ဆိုင်ရာပြsiteနာများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ငါတို့ကြည့်ရှုရန်သင့်အားဖိတ်ကြားသည် ဘလော့ဂ်... နောက်မှတွေ့မယ် ဂျေ